Unina ucela ukufuniswa indodana yakhe | News24
Unina ucela ukufuniswa indodana yakhe
UPrince Mtolo wanyamalala ekhaya ngomhlaka 1 kuMandulo, umndeni wakhe unxusa amalungu omphakathi ukuba alekelele ngokuthungatha ingane yabo.
UPRINCE Mtolo, obuye abizwe ngesibongo sika yise esithi Tembe, oneminyaka engu-10, owaseDube Village, eGroutville, wanyamalala ekhaya ngomhlaka 1 kuMandulo (September) 2016.
Umama wakhe, uNksz Sibongile Mtolo uthe ngalelolanga uPrince wavuka ekuseni ngabo-6 wathi uyozikhulula ngaphandla kwaba ukunyamalala kwakhe lokho.
Uqhube wathi ngoMgqibelo odlule ubikela amaphoyisa aKwaDukuza ngokunyamalala kuka Prince.
Uthe: “Isizathu sokuthi ngithathe isikhathi eside kangaka ukubikela amaphoyisa ukuthi akaqali ukunyamala kodwa kuyaqala ukuthi anyamalale isikhathi eside kanje, futhi ngaphambilini bengihlezi ngimthola komakhelwane noma kubangani bakhe. Sengimcinge yonke indawo, ngiye ngisho nasesibhedlela kodwa lutho,” kusho uNksz Mtolo.
Unxuse amalungu omphakathi anagaba nolwazi lokuthi indodana yakhe ikuphi ukuba axhumane naye enombolweni ethi 060 315 3239 noma axhumane nomalume ka-Prince uMnuz Jabulani Mtolo enombolweni ethi 082 488 3391.